ko htike's prosaic collection: ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို နယ်စွန်နယ်ဖျားရှိထောင်များသို့ ခွဲပို့
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို နယ်စွန်နယ်ဖျားရှိထောင်များသို့ ခွဲပို့
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၄
နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အင်းစိန်ထောင်ရှိ နာမည်ကျော် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို နယ်ထောင်အသီးသီးသို့ အောက်ပါအတိုင်း ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသူများဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ)က ဆိုသည်။
၁။ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး - ကျိုင်းတုံ(မြို့အကျဉ်းထောင်)၊ ရှမ်းပြည်နယ်
၂။ မြအေး(သူရ) - လွိုင်ကော်၊ ကယားပြည်နယ်
၃။ ပြုံးချို (ဋ္ဌေးဝင်းအောင်) - ကော့သောင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်း
၄။ အောင်သူ နှင့် အခြား ၈ ဦး - ပူတာအို၊ ကချင်ပြည်နယ်
၅။ ဋ္ဌေးကြွယ် - ဘူးသီးတောင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
၆။ မျိုးအောင်နိုင် - ကလေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
၇။ လှမျိုးနောင် - မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်ပြည်နယ်
On 11 Novermber, Nine 88 Generation Group leaders including Min Ko Naing were get long term imprisonment 65 years again in Maubin prison same as previous Fourteen members of the 88 Generation Students Group. After that they were transferred to Insein prison then transferred again far from Rangoon and different areas per each in this early morning as following –
Min Ko Naing and Ko Ko Gyi – Kengtung Prison, Eastern Shan State
Mya Aye (Thu Ya) – Loikaw Prison, Kayha State
Pyone Cho (Htay Win Aung) – Kawthaung Prison, Tenasserim Division
Aung Thu, Bo Bo Win Hlaing and another7members – Putao Prison, Kachin State
Htay Kywe – Buthidaung Prison, Northern Arakan State
Myo Aung Naing – Kale Prison, Sagaing Division
Hla Myo Naung – Myitkyina Prison, Kachin State.
Saw Wai, Win Maw, Tint San, Myat San and Su Su Nway - Mandalay Prison
Posted by ကိုထိုက် at 12:17
16 November 2008 at 19:28
what is an offspring?
what is etc etc...
all are criminals in lawless Burma...
in lawless Burma nobody is safe...
Peace is gone... my peace is gone...
20 November 2008 at 19:21
11 December 2008 at 08:07
26 March 2009 at 03:06
13 April 2009 at 13:29
13 April 2009 at 15:04